Zimbabwe: Statelessness crisis traps hundreds of thousands in limbo | Amnesty International
Amnesty International/Tsvangirai Mukwazhi
16 April 2021, 05:49 UTC
For Zimbabwe’s stateless, everyday life is filled with obstacles. Accessing education, healthcare and employment can be a nightmare, and the sense of exclusion and rejection is soul destroying
The Zimbabwean authorities must take concrete action to address this crisis, including mapping and registering all stateless people. Authorities must ensure laws are in line with Zimbabwe’s own Constitution, as well as international human rights law
For example, the 1984 Citizenship of Zimbabwe Act 23 was used to arbitrarily deprive persons of “foreign origin” of their right to a Zimbabwean nationality, even though most were entitled to citizenship under the Constitution. Section 43 of Zimbabwe’s Constitution states that any resident who was born in Zimbabwe to parents with a claim to citizenship of any SADC state - including Malawi, Mozambique, Zambia and South Africa - is a Zimbabwean citizen by birth.
Lulamani, a 23-year-old woman, said:
The Zimbabwean authorities must publicly commit to creating an equal and inclusive society that accords citizenship to any person born on Zimbabwean soil, without discrimination based on national or ethnic origin